ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေးများ | USAHello မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များ | USAHello
ဒုက္ခသည်များ, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, အေပျအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ (အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ) နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအားလုံးဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ကုသခံရဖို့ထိုက်. USA တွင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အခွင့်အရေးရှိသည်. ဤအချက်အလက်သင်သည်သင်၏ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေးများကိုသိကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်, သငျသညျနီပါလီအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်မှလင့်များတှေ့လိမျ့မညျ, ဆိုမာလီ, ပြင်သစ်နှင့် Arabic အဘိဓါန်.
ဤအချက်အလက်သည်သင်ပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်. ဒါဟာဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်သည့်လမ်းအတွက်မဖြစ်သင့်. လူတွေကြောက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်မခံကြရန်အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
USA တွင်, သငျသညျနှုတျဆိတျဖြစ်ခြင်းနှင့်ရဲမှဘာမှမပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျလုပ်နိုင်တဲ့ပြောပါနှင့်တရားရုံးတွင်သင်တို့တဘက်၌အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဘာမှ. သင်ကအေးဂျင့်ပြောပြနိုင်, “ငါပဉ္စမပြင်ဆင်ရေးတရားတွေ့” နှင့်စကားမပြောတတ်ကြဘူး.
သင်ကူညီနိုင်သူဖြစ်သည်နှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှေ့နေတွေရှိပါတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် Immigrationlawhelp.org အပေါ်တစ်ဦးလိုလားသူ Bono ရှေ့နေရှာတွေ့. ထိုအသင်သည်တတ်နိုင် သင့်ဒေသခံ ACLU ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူကို USA အပြင်ဘက်ဖြစ်ကြပြီးပြန်လာဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ခရီးစတင်မတိုင်မီဒီမှာ USA တွင်ရှေ့နေကိုဆက်သွယ်သင့်တယ်. ခရီးသွားလာအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်ဖို့သေချာအောင်သင့်တယ်, တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပါအဝင်, အစိမ်းရောင်ကဒ်, သို့မဟုတ် ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း.
လုပျတဲ့သူဒုက္ခသည်များ မဟုတ် အစိမ်းရောင်ကဒ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ခရီးမသွားသင့်တယ် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအချိန်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပ, သငျသညျခွောကျအမည်ရှိနိုင်ငံများမှမဟုတ်ရင်တောင်.
သင်သို့မဟုတ်သင်သိတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလျှင်, သငျသညျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကူညီစောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းအီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် (IRAP) airport@refugeerights.org မှာ, သင့်ရဲ့မခေါ် ဒေသခံ ACLU, နှင့်သင့်သို့မဟုတ်အခြားသူများသတင်းပို့’ ယင်းမှအတွေ့အကြုံ အမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအစည်းအရုံး (AILA).
သတိရ: သငျသညျခရီးသွားပြုလျှင်, သင်နှင့်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာရန်လိုအပ်မည်.
သငျသညျကိုယုံပါလျှင်သင်သို့မဟုတ်သင်သိသူတစ်ဦးဦးသောကွောငျ့သင့်ရဲ့ဘာသာရေးကိုတစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသားကောင်ဖြစ်ခဲ့သို့မဟုတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပါသည်, အမျိုးသား, သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်, သင်သည်လည်းသင့်ပါတယ် တောင်ပိုင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုဥပဒေရေးစင်တာကသတင်းပို့ (SPLC).
သင်သည်သင်၏ဘာသာတရားကိုကျင့်သုံးမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျကိုးကှယျမှုတစ်ခုအရပ်သို့သွားခွင့်ရှိသည်, တရားဒေသနာနှင့်ဘာသာရေးပို့ချချက်တက်ရောက်ရန်နှင့်နားမထောင်, အသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, နှင့်အများပြည်သူအတွက်ဆုတောင်းပဌနာ. သငျသညျဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ့ကြုံခံစားသို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရား၏ပစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုရင်, အမေရိကန်အစ္စလာမ့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ကောင်စီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် (ယခုအချိန်တွင်).
သငျသညျအင်တာဗျူးဖို့သဘောတူခဲ့လျှင်, သငျသညျတခုရှေ့နေပစ္စုပ္ပန်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ရှာတှေ့နိုငျ Clinical သို့မဟုတ်ကနေ AILA.
မိဘများအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးမှနေသားတကျဖြစ်ကြပြီးဘယ်လိုကလေးတွေသို့မဟုတ်လူငယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုအကြားမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကွာဟမှုမကြာခဏရှိပါတယ်. သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်လျော်သောအင်တာနက်ဆိုက်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသင်၏သားသမီးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စကားပြောနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကိုသင်ရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်ထား. အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် '' လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ပြဿနာအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်သူတို့ကိုအားပေး. ရှေ့ဆက်အချိန်လမ်းညွှန်ချက်များ setting သို့မဟုတ်ပင်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ.
သငျသညျမိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံကိုကူညီအသုံးပွုနိုငျ apps များရှိပါသည်. သင်တို့သည်လည်းထွက်ရှာတှေ့နိုငျ သင့်ကလေး၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့ဘယ်လို နှင့်မှ ပို. အကွံဉာဏျရ Teensafe.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၌ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်ပါနဲ့? အောက်တွင်သင့်ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ ကျေးဇူးပြု..
ဤအချက်အလက်သည်အခြားဘာသာစကားများကို Download လုပ်ပါ
ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းကမ္ဘာ့ဖလားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလက်တွဲတွင်ဤပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင် (CWS). CWS လေးအခြားဘာသာစကားများအတွက်သတင်းအချက်အလက် posted ထားပါတယ်:
နီပေါအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက် Read သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်
ဆိုမာလီအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက် Read သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်
အာရဗီဤအချက်အလက် Read သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်
ပြင်သစ်တွင်ဤအချက်အလက် Read သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်
အင်္ဂလိပ်ဤအချက်အလက် Read သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်
ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ဘုရားကျောင်း World Service ဒုက္ခသည်များသင့်အခွင့်အရေးများ KNOW ကကူညီဤပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်နေများအတွက်.
USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.